Qaxooti Somali ah oo ku qul qulaya dalka Tunisia | raascasayrmedia.com
← Baasboorka Soomaaliya oo la diiday, Cilado lagu sheegay awgood
Shabaab oo soo qab qabatay dad lagu sheegay gacan ku dhiiglayaal →
March 18, 2011 · 8:30 pm
Qaxooti Somali ah oo ku qul qulaya dalka Tunisia
Kumanaan Qaxooti Soomaali ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay gaareen Xeryaha Qaxootiga ee ku yaala gudaha dalka Tunisia kuwaasi oo ka cararay rabashada ka socda gudaha dalka Liibiya oo horey dilal loogu gaystay.
Madaxa arimaha gar gaarka ee Midowga Yurub Kristalina Georgieva ayaa sheegtay in Qaxootigan ay gaarayaan ilaa 150-kun oo qof kuwaasi oo soo buux dhaafiyay Xeryo ku meel gaar ah oo Hay’adda UNHCR ay ka samaysay xadka kala qeybiya dalalka Tunisia iyo Liibiya.
Mrs. Georgieva ayaa waxaa ay hadalkeeda raacisay in Midowga Yurub ay wadaan dagaalo dib u dajin loogu samaynayo Muhaajiriinta Soomaalida ah ee ku qul qulaya gudaha dalka Tunisia islamarkaana ay goobahaasi diyaarisay Hay’adda Qaxootiga ee UNHCR.
“Waxaa jira dad kale oo faraban oo iminka ku xayiran magaalada Xadka ku taala ee Ras Ajdir, waxaana dadka haysta dhibaatooyin isugu jira biyo la’aan iyo cuno la’aan maadaama ay meesha ay tahay dhul lama dagaan ah oo cimaladeeduna aad u kulushahay” ayay tiri Kristalina Georgieva.
Dhinaca Madaxa Hay’adda UNHCR Antonio Guterres ayaa ugu baaqay Hay’adda WHO in kaalmooyin caafimaad ay gaarsiiso dadkaasi dhibaataysan si looga hortago cudurada faafa ee ka dhalankara dadka isugu soo ururaya xeryaha cusub oo aan xaladooda Caafimaad wanagsanayn.
Hay’adda WFP ayaa iyana sheegtay inay wado dadaalo ay kaalmooyin bini’aadanimo oo deg deg ah ay ku gaarsiinayso dadka kasoo cararaya dhibaatooyinka ka jira dalka Liibiya islamarkaana ladaala dhacaya nafaqo darida inay gaarsiiso gar gaar qiimihiisu dhanyahay 38.7-Milyan oo Dollar-ka Maraykanka ah.
Khadiijo Sheekh Cali oo da’deedu tahay 24-jir ayaa mar ay u waramaysay Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxaa ay sheegtay inay aad uga walaacsantahay hadalka kasoo yeeray Hay’adda UNHCR oo ku aadanaa in Qaxootiga Soomaaliyeed dib loogu celinayo dalkooda taasi oo ay sheegtay inay xiligaan qatar tahay in ay dib ugu laabato dalka Soomaaliya oo aan ka jirin Xasilooni iyo kala dambeyn.
“Halkaan waxaan ka helayaa cuno, biyo nadiif ah iyo amni, maxaa dib noogula celinayaa dalkeena oo xligaan ay ka socdaan dagaal aad u xun, waxaan ugu baaqayaa beesha Caalamka inaysan dib noo celin, islamarkaana ay halkaani nagu caawiyaan” ayay tiri Khadiir Sheekh Cali.
Ugu dambeyn ayaa dadka Soomaalida ee iminka ku sugan xadka kala qeybiya dalalka Tunisia iyo Liibiya waxaa ay sheegeen inay kala kulmeen shacabka reer Tunisia soo dhawayn aad u diiran iyagoo sheegay inay siiyeen Hoy iyo goobo caafimaad oo lagu daaweeyo.